Muuri News Network » Dhegeyso: Nabadoon Fanax oo Si Kulul oga hadlay dhibaatada Tubta Colaada iyo Hotel Afrika oo…
Dhegeyso: Nabadoon Fanax oo Si Kulul oga hadlay dhibaatada Tubta Colaada iyo Hotel Afrika oo…
Dec 21, 2016 - Comments off
Nabadoon Maxamed Cumar Fanax ayaa ka hadlay arimo ku saabsan Shirar Beesha Biimaal iyo Habargidir ku dhexmaray Hoteel ka mid ah hoteelada Muqdisho oo lagu magacaabo Hotel Afrika.
Nabadoonka ayaa sheegay in Shirkaasi ay gogoshiisa dhigtay Hayadda Tubta Nabadda oo iyado dowr weyn ka ciyaartay hurinta Colaadda Gobolka shabeelaha hoose; dadka ka mid ah labada beeloodna isku keentay.
Nabadoon Fanax ayaa sheegay in sidan oo kale horay ay heshiisyo ugaleen labadan beelood Balse Marwalbaba ay heshiiska burin jirtay Beesha Habargidir oo iyado ogaatay in ay qalad ku joogto Gobolka shabeelaha hoose, balse kulamadan soo noqnoqday ayuu ku tilmaamay kuwo mashaariic lagu cuno oo aanan wax heshiisdanbe labadaan beelood dhexmaridoonin.
Nabadoon fanax ayaa sheegay in dhulka shabeelaha Hoose ay Beesha Biimaal masuul katahay; cidna aysan kala gorgortameyn lahaanshaha dhulkeeda; isagoo sidoo kale cadeeyay in ay nasiib Darro tahay in beel katimid Guuraceel aan waqti kulumino maadaama waxwalba ay iska cadyihiin balse aanan lahu qanceyn runta iyo xaqiiqda jirta.
Nabadoon Fanax oo la soo xiriiray Websideka Muurinews ayaa sheegay in aysan jirin cid wax heshiis ah ka soo qaadi karta Beesha Habargidir ayna diyaar uyihiin difaaca dadkooda iyo Deegaankooda ciidan iyo awood kufilana ay maanta haystaan cid ubabacdhigikartana aysan jirin.